Uda: ọgụgụ isi, akpaghị aka Content Curation | Martech Zone
Ugboro: ọgụgụ isi, akpaghị aka ọdịnaya
Ọnyà na-eme ka ọwa gị dị iche iche na ọdịnaya na elekere na elekere niile. Branddị gị na ndị na-ege gị ntị na-ejegharị, ebe ọ bụla ha nwere ike ịga. Ọnọdụ na-enye gị ngwaọrụ iji dozie ọdịnaya dị elu na-akpali akpali sitere na Weebụ yana site na nchịkọta nke ọdịnaya nke mbụ nke ga-eme ka ndị na-ege gị ntị laghachi maka ihe ndị ọzọ. The Trapit Content Curation Center na-eji ọgụgụ isi dị elu iji rụọ ọrụ na nyocha nke onwe nke mgbasa ozi na ọdịnaya sitere na Weebụ iji bulie ma kwado akụkọ akụkọ gị.
Ọnyà na-enyere gị aka iwulite ma jikwaa mkpokọta siri ike ma na-adọrọ mmasị na isiokwu ọ bụla kachasị dị mkpa maka ndị na-ege gị ntị site na iji otu ụzọ dị mfe iji bipụta ngwa, email, netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ ibe weebụ na ezigbo oge ma ọ bụ na oge.
Otu Ugbo si arụ ọrụ
Discover - Detuo na ọba akwụkwọ na-eto eto nke Trapit nke ihe karịrị 100,000 ọkachamara nyocha, ma ọ bụ tinye isi ọdịnaya gị na ngwakọta. Site na blọọgụ na ederede akwụkwọ akụkọ na infographics ma ọ bụ vidiyo, Trapit na-achọpụta ọ bụghị naanị ọdịnaya kachasị ewu ewu, mana akụ bara uru ndị ahụ zoro ezo.
ọnyà - Kọwaa ọdịnaya kachasị dị mkpa maka ndị na - ege gị ntị - ma BRA ya - n'oge. Ọnyà na-amuta ihe kacha dị ndị na-ege gị ntị mkpa ma na-emezigharị site na ịmegharị ma dozie nhọrọ ọdịnaya dabara nke ọma. Nwere ike ọbụna nyochaa nsonaazụ site na isiokwu, mma, mkpado na ọbụna ọnọdụ, na-achọpụta naanị ọdịnaya dị oke mkpa gosipụtara.
anapụta - Onya na-ekesa ọdịnaya a - na - akpaghị aka - na mgbasa ozi mmekọrịta, akwụkwọ ozi email, ngwa mkpanaka, ebe nrụọrụ weebụ - ebe ọ bụla ndị na-ege gị ntị họọrọ iri ọdịnaya. Determine na-ekpebi ebe kacha mma - yana ngwaọrụ kacha mma - na Trapit ga-edozi ndị ọzọ
Ugbo ga-eweta webinars kwa izu ị nwere ike ịdebanye aha ma hụ ngosipụta. Deba aha ugbu a!
Tags: Amamịghe echichenchịkọta ọdịnayannyefe ọdịnayanchọpụta ọdịnayanyefee ọdịnayaọgụgụ isiọnyànyocha